Nexus Sailfish ga-enwe mgbawa Snapdragon 820 na ihuenyo 5,2-inch | Gam akporosis
Ihe ohuru nke Nexus Sailfish tinyere ya na 5,2 ″ ihuenyo na Snapdragon 820 chip
Nexus abụọ na-abịanụ nke HTC, Marlin na Sailfish ga-abụ onye Taiwanese emeputa ndu maka afọ a. Eziokwu bụ na Google abịala nyere otu n'ime ndị bu ụzọ nwee gam akporo aka na ekwentị ndị ahụ nke kpaliri anyị na ihe ndị ọzọ na sensations na ahaziri Sense oyi akwa ama ke akpa isua nke green nwa bebi si OS.
Mgbe anyị na-enweta ọhụụ ọhụrụ na ngwaọrụ Nexus abụọ a, anyị nwere ugbu a faịlụ nke Sailfish Ebee ka akụkụ nke nkọwa ọ nwere na nke ga-abata mgbe Google gosipụtara ya obere oge. N'ime ihe ndị ahụ, anyị nwere ike ikwu maka mgbawa Snapdragon 820 na ihuenyo 5,2-inch.
Na faịlụ ahụ leaked build.prop, ị nwere ike ịchọta nkọwa nke Sailfish. Site na inwe msm8996 na ARM64-V8a, ọ pụtara na ị na-ekwu maka Snapdragon 820, mgbe ihuenyo edepụtara nwere uru njupụta nke 420 nakwa na nha nke dị sentimita asatọ ga-abụ 5,2 na mkpebi ihuenyo nke 1080p. Nke a ga - abụ otu ihe dị iche na Marlin, nke ga-enwe Quad HD.
Del Marlin anyị maara na ọ ga-enwe a 5,5-anụ ọhịa ihuenyo na Quad HD mkpebi (1400 x 2560), mgbaji Snapdragon 820, 4GB nke RAM, na ngwakọta igwefoto 12MP / 8MP. Fọdụ ezigbo ụdịdị maka ọkọlọtọ maka afọ a, mana ọdịiche nke ịbụ Nexus, nke pụtara na ị ga-enwe mmelite gam akporo niile mbụ.
Thebụ ihe omuma ihe omuma @evleaks, anyị enweghị obi abụọ ọ bụla banyere nkọwa nke njedebe abụọ a nke ga-abịa n'oge na-adịghị anya Android 7.0 Nougat dị ka nsụgharị ngwanrọ na ọchịchọ nke ọtụtụ iji nweta Nexus smartphone nwere ndị na-emepụta Taiwanese dị ka nke rụpụtara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Nexus » Ihe ohuru nke Nexus Sailfish tinyere ya na 5,2 ″ ihuenyo na Snapdragon 820 chip
Prisma, ngwa ejiji maka ihe nzacha nka, dị ugbu a na Playlọ Ahịa Google
Cyanogen Inc. na-ebelata ndị ọrụ mgbe ha na-elekwasị anya na mmepe ngwa